Qarax Goor Dhaw kadhacay Duleedka Magaalaga Kismaayo Ee Maamulka Jubaland – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubadda hoose, ayaa sheegaya goor dhaw inuu halkaasi ka dhacay qarax aad u xoogan.
Qaraxaan oo aan ilaa iyo hada la xaqiijin nooca uu yahay, balse jugtiisa aad looga maqlay Magaalada Kismaayo gudaheeda, ayaa la sheegayaa in lala eegtay ciidanka tababarka uga socda Xerada Madhamaato ee Magaalada Kismaayo.
Wararka ayaa sheegaya ciidamada oo Feel ku jira in qaraxaan uu dhacay, waxaana jira dhimasho iyo dhaawac badan oo soo gaaray ciidamada Maamulka Jubbaland ee tababarka u taagnaa.
Ilaa hada waxaan la xaqiijin nooca qaraxa uu yahay, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya nooca qaraxa, Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa uu yahay Miino meesha ku aasneyd, halka wararka qaarna ay sheegayan in qaraxa uu yahay Ismiidaamin.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Jubbaland oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay inay aad u mashquulsan yihiin oo aysan Warbaahinta la hadli karin.